အားပါးပါး !! ကြည့်သူတိုင်း မိုက်လှကြီးလားလို့ အာမေတိတ် ဖြစ်သွားစေမယ် နန်းမွေစံ ရဲ့ video – Shwe Yoe
အားပါးပါး !! ကြည့်သူတိုင်း မိုက်လှကြီးလားလို့ အာမေတိတ် ဖြစ်သွားစေမယ် နန်းမွေစံ ရဲ့ video
မော်ဒယ်လ်နန်းမွေစံ ကတော့ လက်ရှိမှာ အောင်မြင်လျက် ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် တွေ ထဲမှာ တစ်ယောက် အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေကာ ကြော်ငြာတွေကို လ ည်း ရို က်ကူးလျက်ရှိနေသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမိုကျစား ပုံရိပျလေးတှေ ကို လူမှုကှနျ ယကျစာမြ ကျနှာထကျ တငျပေးလေ့ ရှိတဲ့ သူမ ကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကို အခိုငျအမာရယူထားနိုငျသူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ အမိုကျ စား ခန်ဓာကို ယျကောကျကွောငျးအလှကို ပိုငျဆိုငျထားနိုငျခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတျတှေ ရဲ့ အခဈြတျောလေး ဆို ရငျလညျး မမှားပါဘူး။ သူမကတော့ ယခုမှာ အလနျးစား ဖကျရှငျေ လးကွောငျ့ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ အလှတရားလေး ပျေါလှငျနပွေီးအမိုကျစားပိုဈ့ လေးတှပေေးနခေဲ့ ပါတယျ။
သူမကတော့ ”ဘာကြည့်တာလဲမောင်” ဆိုပြီး အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေ နဲ့အတူ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အသည်းယားစရာပုံစံလေးနဲ့ လှပနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေဟာ ပရိသတ်တွေကို အချစ်တွေပိုစေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မော်ဒယ်လ်နန်းမွေစံ ရဲ့ အမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ ကြွေလောက်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
photo and video- Nang Mwe San
မျောဒယျလျနနျးမှစေံ ကတော့ လကျရှိမှာ အောငျမွငျလကျြ ရှိနတေဲ့ မျောဒယျလျ တှေ ထဲမှာ တဈယောကျ အပါအဝငျဖွဈပွီး အနုပညာအလုပျတှကေို လုပျကိုငျလကျြရှိနကော ကွျောငွာတှကေို လ ညျး ရို ကျကူးလကျြရှိနသေူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။
အမိုကစြား ပုံရိပလြေးတှေ ကို လူမှုကှနြ ယကစြာမွ ကနြှာထကြ တငပြေးလေ့ ရှိတဲ့ သူမ ကတော့ ပရိသတတြှရေဲ့ ခဈွခငအြားပေးမှုကို အခိုငအြမာရယူထားနိုငသြူလေးပဲ ဖှဈပါတယြ။ အမိုကြ စား ခနျဓာကို ယကြောကကြှောငြးအလှကို ပိုငဆြိုငထြားနိုငခြဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတတြှေ ရဲ့ အခဈွတောလြေး ဆို ရငလြညြး မမှားပါဘူး။ သူမကတော့ ယခုမှာ အလနြးစား ဖကရြှငြေ လးကှောငြ့ ဆှဲဆောငမြှုရှိတဲ့ အလှတရားလေး ပေါလြှငနြပှေီးအမိုကစြားပိုစြ့ လေးတှပေေးနခေဲ့ ပါတယြ။
သူမကတော့ ”ဘာကွညျ့တာလဲမောငျ” ဆိုပွီး အမိုကျစား ပုံရိပျလေး တှေ နဲ့အတူ လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာထကျမှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ အသညျးယားစရာပုံစံလေးနဲ့ လှပနတေဲ့ ပုံရိပျလေးတှဟော ပရိသတျတှကေို အခဈြတှပေိုစခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ မျောဒယျလျနနျးမှစေံ ရဲ့ အမိုကျစားပုံစံလေးနဲ့ ကွှလေောကျစရာကောငျးလှနျးတဲ့ပုံရိပျလေးတှကေို ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ရန်သူကို ဉာဏ်နည်းတယ်ဆိုပြီးအပြောင် အပျက်လုပ်နေရုံနဲ့ အနိုင်ရမှာမဟုတ်ကြောင်း ကို ချက်ကျလက်ကျရှင်းပြလာတဲ့ နိုဗန်ထူး
ဆက်ဆီကျကျ တင်ရင်းကိတ်လွန်းနေတဲ့ အလန်းစားပုံတွေချပြလိ်ုက်တဲ့ အယ်လာ
ထောင်ထဲမှာ ဆေးကုသဖို့လိုအပ်နေတယ် ဆို တဲ့ မအူဝဲရဲ့ လက်ရှိ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ